गोकुल बास्कोटा किन गर्दैछन् राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउँदैछन् भन्ने प्रचार ? - Sankalpa Khabar
गोकुल बास्कोटा किन गर्दैछन् राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउँदैछन् भन्ने प्रचार ?
काठमाडौं । नेकपा ओली समूह यतिबेला प्रचण्ड–माधव समूहको विरुद्धको प्रचारमा राम्रैसँग लागेको देखिएको छ । जसको नेतृत्व गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतले गरेका छन् ।
बास्कोटा र बस्नेत दुवै प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट नेता हुन् । दुवैको पहुँच बालुवाटारको किचेन क्याबिनेटसम्म रहेको मानिन्छ । ओलीको बचाउ गर्न दुवैले राम्रै हथकण्डा प्रयोग गर्न थालेको देखिएको छ ।
बास्कोटा र बस्नेत दुवैको मिडियासँग राम्रो पहुँच छ । बास्कोटा मिडियामा त्यति अन्तर्वार्ता दिन रुचाउँदैनन् । उनी आफ्ना मनमा लागेका र नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा काल्पनिक कुरा लेखेर भ्रम छरिरहेका हुन्छन् । जसलाई अनलाइन मिडियाले तुरुन्तै समाचार बनाउने गरेका छन् ।
अर्कातिर बस्नेत चाहिँ बोलाई बोलाई पत्रकारलाई अन्तर्वार्ता दिन रुचाउँछन् । जसमार्फत ओलीको बचाउ र प्रचण्ड–माधव समूहविरुद्ध केही न केही भ्रम छरिहाल्छन् ।
मंगलबार पनि त्यस्तै देखियो । महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट हुन चाहने सांसदले आफूसँग सम्पर्क गर्न भनेर उनले एक अनलाइनलाई अन्तर्वार्ता दिए । त्यति मात्र होइन, उनले प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीसँग एक वर्षका लागि सत्ता सहकार्य गरौैं भनेर प्रस्ताव पठाएको भनेर भ्रम छरे । जबकि त्यस्तो कुनै सम्भावना देखिएको छैन ।
लगत्तै पूर्वसञ्चारमन्त्री बास्कोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले महाअभियोग ल्याउँदैछन् भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखे । जबकि राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग ल्याउने कुनै मनशाय नभएको भनेर प्रचण्डले केही समयअघि सार्वजनिक रूपमै बोलिसकेका छन् । तर, बास्कोटाले यस्तो दाबीसहित लेखे– ‘नेपाल कम्फरटेबल पार्टीले प्रमले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने र राष्ट्रपतिलाई हतोत्ससाही बनाउनकै लागि भए पनि महाअभियोग ल्याउने तयारी गर्दै छन रे ! झलनाथको तयारीमा रामचन्द्र कवाफमा हड्डी भएर मात्र घोषणा नभएको रे। लौन प्रभु ! मिलाई देऊ।’
पूर्वमन्त्रीसमेत भएका व्यक्तिले रे का पछि लागेर ट्विट गरेपछि उनको दाबी पत्याउने नै मूर्ख ठहरिने देखिएको छ । किनभने राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लाग्ने कुनै सम्भावना छैन । उनलाई हट्न दबाबसमेत आउला । तर कांग्रेसले सहयोग गर्ने गुञ्जायसै छैन ।
५ बैशाख ०६:२५